Ingane ibuhlungu kakhulu futhi ivame ukumomotheka, kungani?
Abazali abaningi bathi uma bebona ukugeza, ababuthakathaka babo baqala ukujabula ngisho nangaphambi kokuba bathole ukudonsa kokuqala kwamanzi. Ngendlela, injabulo ababili abadala nabancinyane abasithola emisebenzini yamanzi, izazi zengqondo zihlobana ngokuqondile nezinkumbulo zomzimba wethu mayelana ne-amniotic fluid.
Isifiso sokukhulumisana sivela emntwaneni kakhulu ngaphambi kokuqala ukukhuluma. Futhi ukumomotheka kokuqala uyaphendula kulokho okwenzekayo nxazonke. Kuyaziwa ukuthi ngesikhathi sokulala ezindebe zezinsana lapho kuvele kubonakale "ukumamatheka kwezingelosi". Futhi nakuba lokhu kubonakala kungenxa yezizathu zomzimba kuphela, omama bahlale bebonwa njengokubonakaliswa okuqotho kwenjabulo. Kodwa lokhu kuqala, ukumamatheka okungazi lutho akuhambisani nanoma yikuphi ukuqhathaniswa nokuhleka okusebenzayo, okwesikhashana kamuva kusithokozisa amasonto ambalwa umntwana osekhulile. Lokhu ukuhleka akuyona nje isipho esivulekile kulabo okubhekiswe kuyo, kodwa futhi isisusa esihle kakhulu sokuthuthukiswa kwengane. Ukuhleka kuzalwa ngokuhleka. Ukuzijabulisa kuyadingeka njalo. Ingane njengesiponji ithatha imizwelo yethu: indlela azoyihleka ngayo (nokuthi noma kunjalo), kuncike kakhulu esimweni somama - ukuzola noma ukukhathazeka. Ukuhleka kwezingane kuzalwa ngaphandle kwesidingo sokuxhumana nabathandekayo, bese kusiza ingane ukuba ijoyine iqembu labangane bakhe. Abaneminyaka emithathu ubudala bayaqonda kahle. Lena indlela yabo yokuzihlukanisa nezwe labantu abadala. Ukuhleka kwabo okuvamile kuyisibonakaliso sokuba yingxenye yeontanga, indlela yokuqala yokuphuma kontathu kungu "Baba, Mama, Mina".
Ngenjabulo yokuphulwa kwezinqatshelwe, izingane zijwayele ukujwayele, ngisho nangaphambi kokuya enkulisa. Ngakho-ke, i-prankster, oneminyaka eyodwa ubudala oneminyaka engama-1000 ubudala, uzodonsa amanzi ase-soapy emlonyeni wakhe ukuze afafaze umfowabo, emihlanu uzokwakha amagama ahlekisayo kodwa hhayi "okwepolitiki" futhi ngonyaka ukuhleka, ukuthola ifu ngendlela efanayo, uthi, nge-booty booty. Futhi akukhona ngengozi ukuthi amahlaya "angenalutho" mayelana ne "pi-pi" nelithi "ka-ka" avela ezingxoxweni zezingane ngokuqondile ngemuva kokuthi ama-diapers wokugcina aphonswe ngaphandle futhi ama-panties ayeka ukungcola. Zonke lezi zinhlayiya zisho ngokucacile: "Sisevele sabantu abadala futhi singakwazi ukuhleka ngesidalwa esingenzi lutho nesingenasici esake saba khona!"
Umzimba womzimba uhambisa izinzwa eziningi ezimnandi, okubangela ukumomotheka ekuqaleni (eneminyaka engama-8) nokuhleka (izinyanga ezintathu). Uyathokozisa ngama-caresses, amathrekhi omnene, umsindo omnandi, amazwi ajwayelekile kanye nokubukeka ...
Ngonyaka owodwa ubudala, ukoma kokuzijabulisa kuyanda, njengoba kunesifiso sokuthuthukisa izindawo ezintsha. Inani lemibono enhle liyancipha njengoba inkululeko yokunyakaza iyanda: khumbula ukuhleka okunqobayo, okufaka isinyathelo sokuqala somntwana! Uyakujabulela konke okuhambayo, kungakhathaliseki ukuthi kuyindiza endizayo noma inzalo evela entabeni yezingane. Futhi yeka ukuthi kuhle kangakanani ukuphula indlu yakho eyakhiwe ngamadayisi!
Kulesi sigaba, zonke izinhlobo zokuhleka ezichazwe ngenhla zihlangene zibe munye. Ukubamba, ukufihla, ukukhahlela, ukudlala indiza - konke kuphelile kakhulu. Njengoba inkulumo iqala, ukuhleka kudlulela ngaphezu kwemizwa yemvelo futhi kuba "ngengqondo". Ukuhleka phakathi kwontanga kaningi kuvumela ukuba benze ubungane - okungekho abantwana abangakakwazi ukukwenza ngokuhlanganisa ingxoxo.
Unyaka wesine nangaphezulu:
Amagama aphikisayo kanye "nokugcoba" kunempumelelo enkulu ezithameli zezingane - uma kuthiwa zikhulunywa ngabantwana ngokwabo. Uma "amazwi amabi" ekhulunywa ngabantu abadala, izingane ziyashaqeka. Phela, kuhle ukuphula kuphela leyo mithetho ebonwa yibo bonke abanye ... Baqala ukuzizwa behlekisa ngamazwi nasemicabangweni, izingane zifunda ngesikhathi esifanayo ukubona amahlaya ezincwadini, amathangi.
Ngonyaka ungamjabulisa ingane, imbonise ukuziphatha okungavamile. Bonisa ukuthi uzodla ngokuphakamisa i-spoon endlebeni yakho, noma ufake i-cap yekhanda ekhanda noma amabhuzu ezandleni zakho. Zizenza sengathi uyesaba, isibonelo, ibhola eliqhakazile - elihle, elidlalayo, elidlala ngezwi elishintshileyo, lithi: "O, ngiyesaba, yesaba!" Zenze sengathi ufuna ukuphuza iphalenda ebhodleleni lomntwana. Ungabeka ama-apula noma amathoyizi athambile emathunjini omntwana bese uwadlulisela kwamanye amakamelo. Yenza ubuciko: noma yisiphi isenzo, esingavamile kwengane eneminyaka eyodwa, singenza ukuthi ahleke.
Shintsha izwi lakho bese ukhuluma ngamathoyizi ahlukene. Bonisa imvuthu ukudlala kancane nezilwane ezincane, okuthi, ngokwesibonelo, zidlala ukudlala. Nika ithoyizi eyodwa kumntwana, ake azame ukuyibalekela kumlingisi wakho, uyifihle futhi uyiphakamise. Ungashintsha izwi lakho cishe cishe noma yimuphi umdlalo. Ungazama ukukhuluma ngepayipi (ephepheni ephepheni) noma uhlobo oluthile lwesitsha. Phakamisa ukuthi izinyane liphinde libheke epayipi.
Okukhethwa kukho okuwina. Kubalulekile ukuthi umntwana alindele ukufakwa komzimba ngisho nangaphambi kokuba uthinte umzimba wakhe. Usevele ehleka futhi ewela ngokuhleka. Phakamisa i-crumb for tickling ithoyizi elincane. Tshela ingane: "Khokha umlenze kubhebhe!" - bese ubonisa umlenze webhebu; "Thepha isisu se-teddy bear" - njll. Lapho umntwana eqala ukukhipha ibhere, gubha ithoyizi, njengokungathi uyihleka kakhulu, futhi uhleke ngokuzwakalayo. Ngemuva kokukhipha i-toy ngayinye kukhanye ingane kalula endaweni efanayo - injabulo iqinisekisiwe.
Ngemuva kweminyaka emithathu
Faka umbukiso omnandi
Lo mdlalo uhlobanisa ukunyakaza kwezinyathelo futhi kuyindlela yokwelapha yokukhuluma, kodwa lokhu akuyona into ebaluleke kakhulu enjongweni yayo. Lona umdlalo wehlaya, umdlalo wokudlala. Izingane ziyiqonda ngokushesha imithetho yayo futhi zibonise lezi zihlabelelo kwabanye. Gwema kancane ekhanda futhi ngesikhathi esisodwa khupha ulimi lwakho. Manje zishaya ngemuva kwendlebe engakwesokunxele bese uthatha ulimi ngokushesha ngakwesobunxele, bese uphinda ukunyakaza ngakwesokudla. Ekupheleni kokugxila, thinta intamo yakho bese ususa ngokushesha ulimi. Ucabanga ukuthi umuntu omdala akahlanganyeli ngokungathí sina ezintweni ezinjalo? Uphutha: ukuhleka kuyindaba ebaluleke kakhulu futhi ebalulekile. Ungakwazi, ukumboza ubuso bakho ngezandla zakho, isikhathi ngasinye sishintshe ngokujulile inkulumo yenjabulo ekudabukeleni nasekubuyiseni emuva. Manje ake azame abancane.
Ukudlala izingane (kahle, uma uhlela abantu abathathu noma abane - kungaba abangane bezingane, abafowabo nodadewabo abadala) kufanele baphinde baphinde baphinde bafunde igama elithi "Mina" futhi bangalihleki. Ubani phakathi kwabantwana abangenakuqeda ukuvinjelwa kokuqala, kumele wengeze egameni elithi "Mina" igama noma igama lakhe kuphela. Ezinye izingane ziqhubeka nokuphindaphinda kuphela "I". Iphutha elilandelayo ukuhlanganisa igama elisha. Ngokuvamile, ungahle uhleke kulo mdlalo akunakwenzeka! I-Smeshinka futhi iwela emlonyeni womdlali ngamunye.
Udinga ukudlala ngosuku olususayo. Umsebenzi ukugxumela esitheni sesitha. Ungazama ukufihla isithunzi sakho emahlathini, kodwa namanje uzama ukunqoba ukunqoba kokuqala. Ngemuva komdlalo, ungakwazi ukuzungeza izithunzi nge choki. Vumela ingane imise endaweni ehlekisayo, futhi uzama ukufika endaweni ejabulisayo yomzimba. Dory izithunzi ezisehlotsheni lwe-asphalt nezinduku, futhi okubaluleke kakhulu - ukumomotheka!
Imibala yamathoyizi ithinte ingane
Amagama angavunyelwe, ongenakuze utshele ingane?
Izizathu zokuhlukaniswa kwezingane ezincane
Zingaki iminyaka ukunika ingane ukuba idansa?
U-Anastasia Makeeva wayelungele ukulungisa i-corset, isithombe
Isaladi ne-tuna ne-avocado
Ungakhetha kanjani ukugqoka abesifazane abathandekayo?
Ukumaketha nokuzibandakanya - ezedlule nezamanje
I-truffle ye-chocolate nge-champagne
Snack kusuka amakhowe akheniwe
Ukuxhumeka nokunqamuka kwesikhashana - ukuhlelwa kabusha komzimba
Ukuvakasha okubonakalayo eNew York
Indlela yokwenza amakhandlela ekhaya
Uthando yingqondo ephelele kakhulu emhlabeni
Kusihlwa kusihlwa: isigaba somsebenzi
Ungalungisa kanjani imilenze egobile?
Izikebhe ezinezithende eziphakeme